Landela Ukwabelana Kwemakethe Yesiphequluli kusuka kuColts.com | Martech Zone
NgoMsombuluko, Agasti 27, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Lapho ngibhala okuthunyelwe ku- Abelana Ngemakethe Yesiphequluli, impendulo eningi kokuthunyelwe ukuthi bekungafanele ngizethembe izibalo ezikwiW3Schools.com. Ngikubuze ngempela lokhu kubuya… kungani emhlabeni izibalo zizohluka kakhulu kusuka kuwebhusayithi kuye kuwebhusayithi?
Hhayi-ke, ngenxa yabanikeli… ngithole ukuthi kubaluleke kakhulu! Ngilahle umngani omuhle uPat Coyle i-imeyili futhi ngabuza ukuthi angathanda yini ukwabelana ngezibalo ezithile kusuka Colts.com. Ukucabanga kwami ​​ukuthi umlandeli wezemidlalo okhuthele mhlawumbe uhluke kakhulu kothile ovakashela isayithi mayelana neWeb Technologies futhi kungaba iqembu elihle lokuqhathanisa. Futhi kwaba njalo! Izibalo ezilandelayo zisuselwa ezivakashini zokugcina ezingama-870,000 eColts.com:
Abelana Ngemakethe Yesiphequluli Sezivakashi zaseColts.com:
Abelana Ngemakethe Yesiphequluli Sezivakashi zeColts.com - Ukubuka konke:
Ngubani owaziyo?! Ngizonaka kakhulu izibalo ezizimele zokwabelana zesiphequluli kusuka manje kuye phambili lapho ngizibuka kunokwenza ukucabanga kusabelo sonke semakethe. Kwinothi eliseceleni, nazi izibalo zebhulogi lami lenyanga edlule. Angikaze ngizibheke phambilini, kepha uzobona umehluko omkhulu!
Izibalo zesiphequluli sezivakashi zami:
I-VZ Navigator… Ngine-GPS… Manje Yini ?!
Aug 28, 2007 ku-8: 29 AM
Ngikuzwile nalokhu, futhi ngenkathi kunengqondo, umuntu angasho ukuthi wonke amasayithi azokhiqiza isiphequluli esihlukile esisakazeka ngenxa yezethameli ezihlukile. Ngingathanda ukucabanga ukuthi uma uthathe zonke izibalo waziyela kumawebhusayithi adume kakhulu wazihlanganisa, uzothola lokho abakutholayo. (Angizange ngihlole emthonjeni wabo wedatha).
Ngiyazi ukuthi ama-blogger amaningi ahlelwe kuFirefox, kepha amaColts athola uquqaba jikelele.
Idatha enhle, siyabonga ngokwabelana. Amagrafu amahle, nawo 🙂
Izithombe ze-LA Headshot
Aug 29, 2007 ku-12: 58 AM
Kubonakala kimi ukuthi abantu abafunda amabhulogi bathambekele ekusebenziseni iFirefox kakhulu. Angikaze ngisebenzise i-Internet Explorer kangako. Ngiyaqiniseka ukuthi umphakathi jikelele uyisebenzisa kaningi.
Aug 29, 2007 ku-6: 00 AM
Kuyathakazelisa ukuthi lokho kuzoba… kepha imininingwane inikeza ubufakazi bokuthi uqinisile!
Aug 30, 2007 ku-2: 36 AM
Ngiyajabula ukuthi ubuyekeze lokhu ngezibalo ezihlukile kwa-W3Schools, bengizobhala amazwana ahlabayo kulokho okuthunyelwe!
Iphuzu elivezwe ngempela lapha ukuthi izibalo kuphela ezibalulekile yilezo zesayithi olicabangayo ngaleso sikhathi. Uma ngokwesibonelo isayithi lakho noma indawo yamaColts ingasebenzi ku-IE, amaColts abazoba nezinkinga eziningi kunawe. Isayithi ngalinye kufanele lisebenze nezithameli zalo neziphequluli abazisebenzisayo.
Njengesilinganiso sonke sesabelo sesiphequluli okwamanje, ukubona nje ukuthi iMozilla iqhuba kanjani, ngingathanda ukubona izibalo zesiphequluli seGoogle!
I-PC Hardware Guy
Aug 30, 2007 ngo-8: 37 PM
Ama-computer geek asebenzisa ngokuqinisekile i-Firefox ngaphezu kwe-shmoe ejwayelekile. Ngisebenzisa zombili. Ngisebenzisa i-IE manje manje ngoba ngijwayele, kepha ngihamba kancane ngiya ngaseFirefox. Ikakhulukazi muva nje ngemuva kokushaywa yi-malware kabili ngenyanga eyodwa ngenkathi usebenzisa i-IE.
Sep 10, 2007 ku-9: 58 AM
Siyabonga ngalokhu okuthunyelwe! Konke engikubonile kuze kube manje kuyizibalo ezivela kumasayithi asindayo obuchwepheshe, ngakho-ke abasebenzisi kungenzeka babe namathuba amaningi okuba nesinqumo esiphezulu nesinye isiphequluli ngaphandle kwe-IE. Ngingathanda ukubona ukuthi isixazululo sesikrini esimaphakathi ku-colts.com siyini… Ngifuna ngempela ukusuka ekufuneni i-800x futhi ngisebenzise i-1024x njengesisekelo sami